Mask ukuvikelwa mask - iSearch
Qala Wena workshop ngomshini
2 Amazinga okuvikelwa amaski okuvikela ukuphefumula ahlukaniswe ngezigaba ezintathu
3 Ukuvikelwa okukhethekile kwezicelo ezikhethekile?
4 Yiziphi izimpawu ezihlukahlukene zokuphefumula?
5 Yini okufanele ucabangele uma uthenga umaski wokuphefumula?
6 Isisindo sokuvikela ukuphefumula - kusukela ekuvikelweni komuntu ongacabangi
7 Ukuthuthukiswa komlando wemaski wokuphefumula
8 Isakhiwo esivamile somaski ogcwele
9 Iyini i-mask isigamu kanye nesisindo esihle sokuthuli?
10 Ukusebenza kwe-mask yokuphefumula
11 Yimaphi ama-mask izinhlelo ezikhona?
12 Yikuphi okunye okumele ukwazi ngakho mayelana nemaski okuphefumula
Uma uphefumulela nge-acids, i-gesi noma uthuli oluhle, lokhu kuba yingozi kakhulu empilweni. Inkinga yesikhumba yukuthi ukungcola okukhulunywa ngakho cishe kungabonakali emoyeni wokuphefumula. Nikeza ukuvikelwa kokuphepha okunengqondo ngomshini izinhlelo zokuhlunga ezihlukene, ukuze zivimbele ukuba zibe amaphaphu kanye negazi. Ngokuba uthuli oluhle kukhona kokubili indebe ejwayelekile yekhabe kanye nemasikisi ayihafu ngenhloso yokuhlunga okuhlanganisiwe. Yiziphi izici zokuvikela zokuphefumula ezahlukene ezikufanele, kuxhomeke kumazinga okuvikela.
Amazinga okuvikelwa amaski okuvikela ukuphefumula ahlukaniswe ngezigaba ezintathu
Imaski yokuvikela ukuphefumula, ehlukaniswa njenge-FFP1, inikeza kuphela izinga elincane lokuvikelwa kwezibhamu zokuvikela ukuphefumula ngokuvamile esetshenziselwa ukubhema komsebenzi ophazamisayo noma uthuli, okungeyona eyingozi empilweni.
Ukuvikeleka ngokubhekela uthuli
Ukuvikelwa ngokususwa komhlabathi okungewona u-fibrogenic
ukuphakama okuphelele kwe-25%
I-4-idlulile inani lomkhawulo wendawo yomsebenzi
I buso eyodwa abayizithulu emakwe FFP1 ezingeni, efanelekayo indawo lapho kungekho dusts fibrogenic kulindeleke. I ngomshini isigaba FFP1 ukuhlunga kuze kube 80% we izinhlayiya esemgwaqweni emoyeni. On ukuvikelwa zabasebenzi lokhu ngomshini kungasetshenziswa kuphela nobukhulu 4 izikhathi emsebenzini ukuchayeka mkhawulo.
Ukuvikelwa okuphakathi kwama-particle okuqinile, okwesimanzi nokulimazayo kunikezwa yi-FFP2 mask yokuvikela ukuphefumula. La masks okuphefumula asetshenziswa ngamathuluzi amaningi amandla futhi abe nomthelela owanele wokuvikela
Ukuvikelwa emhlabathini oqinile
Ukuvikelwa ekuthuleni uthuli oluyingozi, ama-aerosols nomusi
Ukuvikelwa kwama-particle fibrogenic
inani eliphakeme le-11% lokuvuza okuphelele
ukuphakama okungaphezulu kwe-10 kwemikhawulo yomsebenzi
Endabeni yama-masks omdabu owakhiwe ngebanga le-FFP2, lezi zilungele indawo yokusebenza lapho izinto nezinto ezilimaza impilo ziguqulwa. Lo moya wokuphefumula we-FFP2 kufanele uqukathe okungenani i-94% yezinhlayiya ezivela emoyeni. Izindwangu ezinhle zokuvikela uthuli lwesigaba sokuvikela se-FFP2 zisetshenziselwa ikakhulukazi ezimayini kanye nomkhakha wensimbi. Kulezi zimo izisebenzi zitholakala emkhunjini, izinkungu ezinobuthi nama-aerosol. Lezi zinto ziyisisekelo sokuthuthukiswa kwezifo zokuphefumula zesikhathi eside ezifana nomdlavuza wamaphaphu. Kodwa futhi ingozi yokuthuthukisa isifo ezifana nesifo sofuba sesifo sofuba siphakeme
Ukuzivikela kokuphefumula ukuphefumula Ukuhlunga okuphefumulayo okuphefumula njengokumangalisa izinga lokuphepha i-FFP3 ivikela ukuqina okuqinile, okwegazi okuyizinhlayiya ezinobuthi. Isisindo sokuvikela ukuphefumula kwesigaba se-FFP3 sihloselwe ukuvikela ngokumelene, ikakhulukazi, izinto ezinomsakazo, imishanguzo, ama-enzyme avela ku-carcinogens.
Ukuvikelwa kokungcola komdlavuza
Ukuvikelwa kokungcola okumsakazo
Ukuvikelwa ngokumelene namagciwane nama-bacteria
Isivikelo ngokumelene nama-fungus pores
Ukuphakama okuphelele kwe-5%
Ukuphakama kwe-30 kudlula inani elinqunyiwe lomkhawulo wendawo yomsebenzi
Amaski okuvikela ukuphefumula, okuyingxenye yekilasi lokuvikelwa kwe-FFP3, anikeze umsebenzisi ukuvikelwa okuphezulu. Ngenxa ukuvuza Imininingwane ebekiwe esiphezulu 5%, okungenani 99% we izinhlayiya kuhlungwa ekilasini ngomshini FFP3 ingasetshenziswa yonke indawo, ikakhulu ukuba asetshenziswe umkhakha amakhemikhali emsebenzini ukuchayeka umkhawulo zingeqi esiphezulu 30 izikhathi
Kuphi izinga lokuvikelwa umuthi wokuvikela ukuphefumula ungokwakhe, uyaziwa ngesikhathi sokuphumula ngqo emaskini okuphefumula. I-mask yokuphefumula ingabuye ibe nombala oqoshiwe. Umbala ophuzi ubheke izinga lokuphepha FFP1. Ezingeni lokuphepha eliphakathi, imaski yokuphefumula ibhalwe ngombala okwesibhakabhaka we-FFP2. Izinga eliphakeme kakhulu lokuphepha FFP3 for mask ukuvikelwa mask ibhalwe umbala obomvu.
Ukuvikelwa okukhethekile kwezicelo ezikhethekile?
Noma ubani osebenza ngezinto eziqukethe izixazululo kufanele asebenzise isisindo esikhethekile sokuvikela ukuphefumula. I-mask evikela ukuphefumula ekhethekile ihlukaniswe kulezi zindlela ezilandelayo:
Ukuvikelwa kokuphefumula ngokumelene negesi eziphilayo kanye namaphule (A)
Ukuvikelwa kokuphefumula ngokumelene negesi eziphilayo kanye namaphule (B)
Ukuvikela ukuphefumula kwama-Acids (E)
Ukuvikela ukuphefumula ngokumelene ne-ammonia (K)
Hlanganisa nokuvikelwa kokuphefumula (ABEK)
Yiziphi izimpawu ezihlukahlukene zokuphefumula?
I-mask cup mask:
I-mask yendebe yilali uthuli oluhle okufanele luzinze ngokukhethekile. Ngenxa yokuzinza okukhethekile, lokhu kungasungulwa masinyane futhi ungakwazi ukugqoka ukuthi singakwazi ukubeka imaski yendebe ngesandla esisodwa, ifaneleka kakhulu ukusebenza kwansuku zonke.
Uma uhlala emgwaqweni futhi udinga kuphela ukuvikelwa kokuphefumula ngesisekelo sigaba FFP1, ungasebenzisa futhi imaski yokunamathisa. Gwema imaski kungagcinwa ukulondoloza isikhala. Gcina amasongo omzimba othungayo othungayo.
Amaski akhethekile afaka i-mask isigamu namaski agcwele.
Umasikisi wesigamu nomaski ogcwele unikeza ukuvikelwa okuphumelelayo kakhulu emiphakathini enobungozi kanye negesi. Yisiphi izinga lokuvikela umaski wesibili noma imaski egcwele incike kusihlungi esakhelwe ngaphakathi. Lezi zihlungi zihlanganiswa unomphela noma zingadluliswa ngokuphila ngokusho kwesicelo sakho.
Lezi masks zokuphefumula ngokuvamile zihlome izinhlelo zokuhlunga eziphakeme kakhulu ukuze ukumelana nokuphefumula kungagcinwa phansi.
Yini okufanele ucabangele uma uthenga umaski wokuphefumula?
Noma ubani ongafuni isidumbu sakhe sokuphefumula njalo noma cha zonke izinsuku angathembela ekuthengeni kwamaski alahlekile. Uma kunjalo, imaski yokuphefumula isetshenziswa kaningi noma nsuku zonke, ukuthengwa kwemaski okuvuselelwa kuyasiza esikhathini esifushane kakhulu.
Uma uthenga i-mask yokuphefumula, i-valve kufanele icatshangelwe. Valve kuqinisekisa ukuthi umsebenzisi has a anele umoya-mpilo umncane futhi ngesikhathi esifanayo uvinjelwa ophumayo lomoya umoya esiswini fogging izibuko ukuze ukuvuza.
Yiqiniso, kufanele uqaphele indawo okumele isetshenziswe ngayo imaski yokuphefumula. Ngalesi sikhathi, umthengi kumele abhekane nezinqubo zamakilasi okuzivikela.
Isisindo sokuvikela ukuphefumula - kusukela ekuvikelweni komuntu ongacabangi
Die ngomshini futhi unezinye amagama kuye ngokuthi basebenzisa kanjani. Ngolunye ulimi, uyaziwa nangokuthi umoya-mpilo imaski noma njenge Ngifake isigubuzelo sokuzivikela esisini okubhekiselwe. Kubizwa nangokuthi i-mask yokuvikela e-ABC ezinsizakalweni eziphuthumayo zomphakathi ezifana neqembu lomlilo kanye ne-THW. Namuhla, naye ubizwa leli gama ensimini yasempi. Ku-NVA ye-GDR yangaphambili, i-respirator yaba isikhulu amasosha Ukuzifihla ngokuthi. I-agent evikelayo ephumelelayo ngokumelene nazo zonke izinhlobo zamathambo angafakwa emzimbeni ngomoya wokuphefumula. Umphefumula uhlukaniswe emaskini egcwele kanye nesigamu noma sekota. Isici esikhethekile yi-particle-filtering half-mask. Ikhwalithi yezinhlobo ezihlukahlukene zemaski yokuphefumula ichazwa emazingeni ahlukahlukene. Lokhu kufaka phakathi i-EN 136, EN 149 ne-EN 140. Emva kwalokho, zingenziwa nge-silicone noma i-rubber. Bobabili banikeza izinga eliphakeme kakhulu lokuphepha kunamaski ayenziwe ngaphambilini esikhumba noma izinto zokugqoka. Ngezimpawu zokuphefumula, kunqunywa umahluko phakathi kwamamodeli ancike emoyeni futhi engekho-recirculation. Futhi, umehluko emva kwe ingcindezi imaski futhi i Jwayelekile ingcindezi imaski wenza. Ngakolunye uhlangothi, amasosha okuphefumula adingeka yizempi, lapho amasosha angavikelwa khona nge-toxin kanye nezithako zezikhali zamakhemikhali noma eziphilayo. I-fire brigade nayo ayikho ngaphandle kwamaski okuphefumula. Ngaphandle kwazo ezihambisana nezembatho zokuvikela ukushisa, bekungeke kwenzeke ukuthi abacimi bomlilo bangasindisa abantu ekushiseni izindlu. Kodwa futhi emkhakheni wezempilo jikelele kanye nokuphepha, imaski yokuphefumula iyisizo esiwusizo. Omunye udinga ukucabangela ukuhlanzwa kwamathangi ahlukahlukene, lapho abasebenzi bekungaba khona ukuqhuma emiphakathini eyingozi.
Kunezinhlobo ezahlukene zokuzivikela zokuphefumula, njenge-mask egcwele kanye nesisindo somzuzu. Zisetshenziswa yizempi, kodwa futhi nezinsizakalo ezisizayo kanye nasemsebenzini.
Ukuthuthukiswa komlando wemaski wokuphefumula
Eyandulela lokuqala ngomshini langempela bebelokhu ekupheleni 19. Imayini yezimayini. Kwakukhona okuthiwa respirators ukusetshenziswa lapho yomoya yabavukuzi kufanele bavikeleke uthuli, okuyinto akunakugwenywa ku nokwehliswa kwesithunzi ore namalahle ngu komhlaba imishini ezimayini. Lezi zindlela ezilula kakhulu, lapho uthuli lwasuswa emoyeni ophefumulayo ngokusebenzisa izihlungi ze-textile. Ukusetshenziswa kwabo kokuqala kwezempi kwakungumaski wokuphefumula ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala. Lapha amabutho kwakudingeka avikelwe emiphumeleni yokuhlaselwa kwesitha kanye nezikhali zokuqala zamakhemikhali. Lokhu kwakudinga ukuthuthukiswa kwezimfanelo ezintsha ekugqinisweni nasekufakeni. Usosayensi wokuqala ukuba carbon izihlungu ukuhlanza esiwuphefumulayo isetshenziswa wokuphefumula, kwaba Russian okuthiwa uNikolay Zelinsky. Ukuqalwa kwakhe kubuyela emuva ku-1915. EMpini Yezwe Lokuqala, kwasetshenziswa amasosha okwakhiwa ikakhulukazi ngezinto zokwakha zangaphandle. onobuhle Abaningi okwamanje wayesanda yasungulwa carbon lemifanekiso, kodwa ifakwe isihlungi eyenziwe ukotini noma ukuhlunga. Ngaphambi kwempi, i-mask yokuphefumula yaqhubeka. Izihlungi zakhiwe ukuze zithole izinhlobo ezahlukene zamakhemikhali. Futhi ngenxa yamahhashi ku-1. Bekusebalulekile "imishini yokulwa", futhi bahlakulela izici ezikhethekile zokuzivikela zokuphefumula. KuMpi Yezwe Yesibili "ama-gas masks" asungulwa. Banikezwa ngezihumusho zabantu abadala kanye nezingane futhi basatshalaliswa kubantu abahlali. Ngalesi sikhathi, lokho okubizwa ngokuthi ama-hoods ukuvikelwa kwegesi nakho kusebenza ngokuphumelelayo.
I-mask yokuvikela ukuphefumula imelela ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwesivikelo somhlabathi esisetshenziselwa ukumba izimayini. Ama-masks kagesi asebenza ngokuphumelelayo ngokwengeziwe ngezinhlobo ezintsha zokuhlunga.
Isakhiwo esivamile somaski ogcwele
Umzimba womaski we-mask ogcwele uqukethe i-raber noma i-silicone. It has amawindi eyodwa noma amabili ukubuka ezixhunywe umzimba masking nge ifreyimu lokunamathisela. Amaski agcwele namawindi amabili wokubukela asetshenziselwa ukusetshenziswa kwezimpini ngenxa yokuthi angathunyelwa ngaphezulu kokulondoloza isikhala. Ngaphezu kwalokho, i-mask ephelele ine-valve, lapho umoya okhishwe umoya okhishwa ngayo ngaphandle. Bane-mask yangaphakathi noma ama-air ducts, lapho umoya omusha ungena khona. Kumele kuqala ukudlulisa isihlungi sokuphefumula, okuyisakhi esisisekelo semaski egcwele. Ngaphezu kwalokho, kunesigqebhezana sokukhuluma kanye nokuqhaqhazela futhi ngokuzithandela isithwathwa sokuthwala. Ifomu elikhethekile le-banding liyakwazi ukuxhuma imaski yokuphefumula kwisigqoko esivikelayo. Ziyasetshenziswa ikakhulukazi emagumbini omlilo nasezindaweni zempi. Endabeni yokuphefumula kwezempi, i-harness ivame ukufakwa esikhundleni senqola ye-rubber, eguquguqukayo kakhulu. Amaski amaningi ane-strap ethwele. Lokhu kwenza kube lula ukugxila entanyeni yakho. Ezindiza, amamodeli anama-bracket ajwayelekile, angafaka ngazo ububanzi ebangeni. Ukuba khona kwe-mask yangaphakathi kunomlando wonke wokuvimbela ukugoqa kwamafasitela okubuka. Uchwepheshe ukhuluma ngokunciphisa "isikhala esisebenza kahle". Lapho kungekho maski wangaphakathi, umoya omusha uholwa emoyeni ukuvimbela ukugeleza. I-mask egcwele ibuye ihlanganise i-hood yokuvikelwa kokuphefumula, okudala ukuguqula kokubili isigqoko kanye nesitifiketi esigcwele sokuzivikela. Ngaphandle kwalokhu okungeziwe, kusetshenziselwa emkhakheni wezempilo nokuphepha ekwakhiweni noma kungasetshenziswa njengesisombululo esiphuthumayo ngenjongo yokuqalekisa. Amamodeli angama-half-ahlomile futhi aqinile ayasetshenziswa kakhulu emasikini egcwele.
I-mask egcwele yenziwe nge-raba noma i-silicone futhi ine-mask yangaphakathi, noma ngabe isistimu yokudonsa umoya kanye namafasitela owodwa noma amabili okubuka. I-subspecies yi-hood yokuphefumula.
Iyini i-mask isigamu kanye nesisindo esihle sokuthuli?
Umswakama omuhle uthuli ubizwa nangokuthi umfutho wokuphefumula ohlaziyizinhlayiya ezijikelezweni zamagumbi. Ihlanganisa impumulo nomlomo womsebenzisi njenge-mask isigamu. Lokhu kunciphisa izinsizakalo zesicelo, ngoba abanalo ukuvikelwa okufanayo kwamehlo avela ebuchosheni kanye nezinye izinto ezingcolisayo njengezimaski ezigcwele. Ngisho nokufakwa uphawu okungeke kwenzeke akuphumelelanga njengoba imaski egcwele ingenziwa ngenxa yenkinga yodwa ekhaleni. Zivame ukusetshenziswa kakhulu emkhakheni wezempilo nokuphepha emsebenzini, isibonelo ekumbiwa kwemayini noma ekwakhiweni. Zibizwa nangokunye ngokuthi izikhuni zokuvikela uthuli futhi manje zenziwe ngokuphelele ngezinto zokuhlunga. I-mask yokuhlunga ukuphefumula i-mask yokuvikela ukuphefumula ivikela indlela yokuphefumula komuntu ogqokayo ekubhekeni kwamanzi aerosol amafutha noma aqueous. Isihlungi sisebenza ngokuvumelana nesimiso se-electrostatic. Njengoba ukuqoqwa kwezidakamizwa kubangela ukwanda kokumelana nomoya futhi ngaleyo ndlela, ngokuhamba kwesikhathi, ukusetshenziswa kwemali okukhuphuka kuyadingeka ngenkathi kuphefumula, kunemithetho eqondile yokuthi ungasetshenziswa kanjani isikhathi eside. Ukuhlelwa kwe-mask isigamu kungatholakala kwizinga le-EN 149. Ihlukanisa amasikisi ayihafu emakilasini amathathu. Eklasini i-FFP-1 ukuvuza ku-valve ye-exhalation kufinyelela kuma-25 amaphesenti. Le mask isigamu kufanelekile kuphela ukusetshenziswa ezintweni ezingekho ezinobuthi futhi futhi hhayi fribogenic. Nalapha futhi, isimiso sokuthi ukuhlushwa kwabo akukona izikhathi ezine ukubaluleka kwalokho okuvame ukuvunyelwa emsebenzini. Ukuvikelwa okungcono kakhulu kunikezwa yi-FFP3 isigamu mask, okungavuza okungeke kube ngaphezu kwamaphesenti amahlanu. Ingasetshenziselwa ukuvikela emithini yemisebe kanye ne-carcinogens futhi iphinde ivikele ekungeneni kwamagciwane amakhulu emoyeni womoya. Ingasetshenziswa ekugxileni izikhathi ezingaba ngu-30 okuvunyelwe ngaphandle kwezingubo zokuzivikela emsebenzini.
I-mask isigamu ithathwa kuphela phezu kwekhaleni nomlomo. Lokhu kwenza uphawu oluphelele lube nzima. I-mask isigamu ihlukaniswe ngezigaba ezahlukene ngokusho kwe-EN standard.
Ukusebenza kwe-mask yokuphefumula
Ukuze kusetshenziswe imaski yokuphefumula, kusetshenziswe isihlungi sokuphefumula. Amaski amahhafu angatholakala kuphela ngesihlungi sokuphefumula. Lezi zihlungi, ezisebenza kakhulu nge-electrostatic principle, zisetshenziselwa ukuhlunga ama-dusts eziqoqa ngokuqondile esihlungi. Lokhu kubangela ukungalungi ukuthi ukuphikiswa okukhulu nakakhulu lapho ukuvuselela kufanele kunqotshwe. Ngenxa yalesi sizathu, isikhathi esiphezulu sokugqoka esichazwe eMithethweni Yezempilo Nezokuphepha kumele sithotshelwe. Enye inkinga ivela lapho ogqoka ephefumula kakhulu. Khona-ke, akukho umoya okwanele oshintshaniswayo futhi i-carbon dioxide ingakha ngaphakathi kwe-mask isigamu. Lokhu kudala ingozi yokungabi nalutho, okubizwa nangokuthi ukuhambisa umoya emibuthanweni yobuchwepheshe. Le ngozi ingenzeka nakwamanye amadivaysi ajikelezayo asebenza ngokuvumelana nomgomo wokuphefumula kwe-pendulum. Endabeni yokuphefumula okuphethe ukuphefumula, umsebenzisi ubangelwa ukungena kwe-vacuum ngaphakathi kwe-mask. Umlawuli wokuphefumula ususa umoya osusiwe ngokucindezela ukulinganisa. Ukucindezelwa okujwayelekile okufinyeleleka kumasks amaningi okuphefumula kuphakathi kwe-4,5 ne-8 bar. I-air recirculated noma idlula emasikini angaphakathi noma ngokusebenzisa amathayi aphikisayo avela emafasitela okubukela futhi ayigweme ukuqhuma. Uma umsebenzisi ephefumula, i-valve yokufaka inhalation ivalwe ngokuzenzekelayo futhi i-valve yokukhipha umoya ivuliwe. Kule nkinga, ukucindezeleka ngaphakathi kwendawo yangasese, ngokuvamile e-3,5 ibha, kugcinwa ngophethiloli entwasaweni yokuphuma. Lokhu kuvimbela ukungena kwe-toxin ngokusebenzisa i-valve yokukhipha umoya nokunye ukuvuza ku-mask. Ukumelana nokuzizwa ngesikhathi se-inhalation kungaphansi kwalesi sigqoko kunokuba imaski isigamu nesihlungi. Noma kunjalo, ukuphikiswa kufanele kunqotshwe lapho kukhululwa.
Endabeni yokuphefumula okuphethe ukuphefumula, ukusetshenziswa kwezindleko zamandla kuyadingeka uma ukhulisa. Esikhathini samaski okuhlunga, ukumelana kukhulu kakhulu uma kuvuliwe.
Yimaphi ama-mask izinhlelo ezikhona?
Umswakama wokuvikela ukuphefumula uhlukanisa izinhlelo ngokucindezelwa okuvamile nangokucindezeleka. Zomi zombili zinezinzuzo nezinkinga, okufanele zilinganiswe ngaphambi kokukhethwa.
Kumaskimu asetshenziswe njengamanje, imaski ye-overprint kanye nemaski okuphrinta evamile ayahlukaniswa. Isikhwama esivamile sokucindezeleka singaqaphela ukuthi ukuhlanganiswa komlawuli wokuphefumula kunombala omnyama noma ohlaza okwesibhakabhaka. Ngaphakathi kwe-mask yokucindezela evamile, ukucindezela komoya okufanayo kufana nendawo yangaphandle. Umfutho ngaphakathi kumaski wokuphefumula uhlolwe futhi ulungiswe umlawuli wokuphefumula. Uma kwenzeka umuthi ovuthiwe ovamile, kunengozi ukuthi ukungcola kungene ngaphakathi kokuvuza okuncane. Lokhu kubangelwa ukucindezelwa okungalungile okwenziwa ngesikhathi sokuphuza, okumelwe kuhlawulelwe ngumlawuli wokuphefumula. Ngakolunye uhlangothi, isisindo esivamile sokucindezela kuvimbela ukulahlekelwa kwemali emikhulu yomoya. Emaskini okucindezeleka kunomshini womoya owu-4 mbar ngaphezu kwengcindezi yomoya emoyeni. Lokhu kwenza inhalation ibe lula kakhulu, okubonakala ngokuphawulekayo ekuzikhandla komzimba. Okumnandi nakho futhi, ukuthi ngokuvuza okuncane akukho ukungcola okungena ngaphakathi. Lokhu kubangelwa ukuthi izimiso eziyisisekelo zomzimba ziqinisekisa ukulingana kwengcindezi futhi lokhu kwenzeka ngesikhwama sokucindezeleka kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Kodwa kunesidingo ngesikhathi esifanayo. Ngisho nokuvuza okuncane kuqinisekisa ukusetshenziswa komoya omusha okwenyuka, okuba nomthelela ngezikhathi zokusebenza ezingasetshenziswa ngokucindezela ukucindezeleka. Ngenxa yalesi sizathu, ukufakwa kwezinto ezikhethekile kwasungulwa, isibonelo, kulabo abasebenzisa umlilo kanye nempi, okwakubandakanya ukuqapha isikhathi esithile somoya omusha. Izindlela ezithuthukisiwe zezobuchwepheshe zokuqapha umoya kanye nokuvikelwa okukhudlwana emasikini avamile okucindezelayo kuye kwaholela i-THW kanye nomlilo ukuze kusetshenziswe ngokuqhubekayo izinhlelo zokucindezela emasikini okuphefumula eminyakeni yamuva. Akunakwenzeka ukuxuba uxhumano lwezinhlobo zomuntu ngamunye zokuzivikela zokuphefumula njengoba zihlomelwa nge-adapters ehlukene ngokuphelele nezintambo.
Yikuphi okunye okumele ukwazi ngakho mayelana nemaski okuphefumula
Umsebenzi we-mask wokuphefumula ungathinteka ngokugqoka izibuko noma izikhumba nesifuba. Bobabili bangabangela ukuvuza.
Njengombukiso wezilwane, lo mask uhlala engozini yokugxila emgodini wezibuko. Futhi izibuko ezikhethekile, okukhona esikhundleni sezinsimbi ze-rubber zakudala zezintambo, azikwazi ukuxazulula le nkinga ngendlela enelisayo. Ama-Eyeglass angenawo uhlaka lwama-classics kodwa anamathe ngqo ngqo emasikini ngosizo lwezinduku zensimbi yikhambi. Isixazululo esiphezulu siyisimiso sokuphefumula somuntu siqu lapho i-lens ithatha isikhundla se-lens yokubukwa ngokugaya emandleni omsebenzisi we-dioptric. Lokhu kulungisa imaski yokuphefumula efanele kumsebenzisi oyedwa. Ukushintshanisa, isibonelo, phakathi kwabacimi bomlilo abaningana besitimela akwenzeki lapha. Isici sezindleko sinomphumela omubi. Ukuthi impi ayivumeli intshebe futhi ingathandeki ku-THW nomlilo, kunomsebenzi ohambisana nokuqina komaski wokuphefumula.
Phakathi kwezinwele ze-chin kanye ne-cheekbones, umoya ongcolile ungangena. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuvuza okubangelwa intshebe kuthinta ukusebenza kahle kwezilawuli zokuphefumula. Ukuvuza okunjalo esifundeni sevevu kungalinganiswa amahora ambalwa ngemva kokushefa kahle. Ukuthi imaski yokuvikela ukuphefumula isetshenziselwa ukugqoka i-ABC i-mask isisusa ukuthi kungani ivikela ngokungahlambuluki kwe-athomu, kwezinto eziphilayo kanye namakhemikhali. Noma kunjalo, lokhu kwenzeka kuphela onobuhle benamuhla. E-Austria ngezinye izikhathi uzwa igama elithi "Zuzz" ngenxa yemaski yokuphefumula. Lokhu kuhlobene nokuthi isihlungi sikhumbuza kancane kancane i-pacifier yabantwana, futhi yilokho okubizwa ngokuthi "Zuzz" eVolksmund e-Austria.
Ama-20 ahlukanisiwe Okuhlalisa Amaski ama-3-Layer Masks ama-masks asemoyeni avikelayo avikela imaski ngokuboniswa kwamacici
I-TOMSHOO imaski yokuqeqeshwa kwamabhayisekili nge-activated carbon lemifanekiso yokuqeqeshwa ngebhayisekili yokugibela ibhayisekili yokugijima isibonisi
【Phefumula kalula】 Ukulungiswa komoya okumbaxambili kanye nokuklama okuphefumula komoya kwimaskhi yebhayisekili kuthuthukise ukujikeleza komoya, kusize ukuqeda ukushisa futhi kunciphise umswakama ngaphakathi kumaskhi, futhi kuqinisekise ukuphefumula okubushelelezi.
【Iyasebenza futhi】 Isihlungi sekhabhoni esenziwe sangasebenza siyashintshana, ngakho-ke awudingi ukufaka indawo yonke imaski yebhayisekili. Lokhu kuyasebenza futhi kuyabiza. Indlu yemaski wokuqeqesha kanye nama-valve angahlanzwa uma kungcolile.
Experience Isipiliyoni esiduduzayo】 Isiqeshana sekhala esiguquguqukayo singashintshwa futhi umkhiqizo ungazivumelanisa kahle nezimo zobuso eziningi. Idizayini yendlebe yokuphakamisa ayicindezeli ezindlebeni zakho futhi ngeke kudinwe ukuyigqoka isikhathi eside.
I-Multipurpose】 Lo mkhiqizo ungasetshenziselwa kakhulu ukwenza ingadi, ukuhamba ngamabhayisekili, izinto zomzimba ngezikhathi ezithile kanye nokubaza.
I-FDBRO Training Mask Workout Mask - - I-High-Altitude-Endurance-Mask yandisa amandla, isipha sokuphefumula esiphikisayo esiphethe icala (elimnyama, i-M) ukubonisa
【】 ISIZATHU SOKUBADINGA: Ukuphefumula kuhlale ukhiye; Noma ngabe isosha yokuphila asebenzayo noma baye bathola izinzuzo zokuqeqeshwa efanele muva nje, wena uyazi manje ukuthi ukuphefumula ngesikhathi umsebenzi kuyingxenye ebalulekile impumelelo yakho. Letha ukufaneleka, ezemidlalo nemidlalo ezingeni elilandelayo ngokufaka phakathi imaski Training namuhla umsebenzi wakho isimiso.
【IZINYATHELO EZINYE ZOKUQALA: Ukushintsha ukuqina kokuphefumula kwakho ngaphandle kokukhipha isisindo ngesikhathi sokuvivinya umzimba. Le mask yokuqeqeshwa inesistimu ye-valve yezinga le-6, kusukela ngomnene kuya ngokweqile, kuye ngokukhuthazela. Ukuphefumula kangcono ngesikhathi sokuvivinya umzimba kuholela ekwenzeni ukukhuthazela okuqhubekayo, amandla okuzivocavoca kanye nokululama okuthuthukisiwe
【OKUHLELEKILE KANYE NOKUBHELEKILE]: Ukwakheka kocingo kwenziwa ngekhwalithi ephakeme, ukwakhiwa okuqinile kakhulu. Yenziwe ngezinsimbi eziqinile eziqinile. Kuyinto elula kakhulu ukugeza. Ungasusa imaski kusuka ebhande ukuze ukwazi ukuhlanza kuphela imaski noma ibhande lokuhlala / ukujuluka kusuka emsebenzini.
【IZINDLELA】: Ungathatha ukuphefumula okujulile ngesikhathi sokuzivocavoca kwakho, okungeke kukukhathele futhi kukuzwe uzivelele ngokwengeziwe. Ukwanda kwe-hormone yokukhula kukusiza ukuthi ushise amafutha amaningi, ukwakha imisipha eminingi, futhi ululame ngokushesha ngemuva kokuqeqeshwa okunamandla.
UKUVIKELA KUSETYENZISWA】 Lo mkhiqizo uthola izitifiketi eziningi, awukho ubuthi, ukuphepha ukusetshenziswa. Uma ukhipha imaski esikhwameni sokuqala se-EVA, imaskhi ingaba nephunga elithile, udinga kuphela ukuyigeza ngamanzi noma ukuyikhipha esikhwameni se-EVA isikhashana, iphunga liyoshabalala.
I-Shirt-Panda 30x yomlomo ongahlafuneki ungqimba olu-3 olungaphezulu kwezindlebe.
QAPHELA KUPHELA E-Shirt-panda.de UKUQHAWULA KUSUKA EJALIMANE! Abanye abahlinzeki kulokhu banikela kuphela abavela eChina ngo-1 MONTH !!!
QAPHELA BONAKALAYO - Ngenxa yamabhande enjoloba ahlanganisiwe, isiqeshana sempumulo kanye ne-loops yendlebe, okokuvikela umlomo ulingana nawo wonke umumo wobuso.
UKUFAKA NGOKUGQIBELA - Imaskhi yoboya engububanzi obungu-3 imnene esikhunjeni futhi inikezela ukugqoka ntofontofo ngisho nangesikhathi eside.
UKWAKHIWA - Indwangu engeyona eyakhiwe eyenziwe nge-polypropylene iqinisekisa ukuphefumula okunethezekile futhi nokusebenza ngokubonga ngokwakhiwa kwayo okuguquguqukayo.
Ukupakisha - Ukuphatha ngomlomo okugcwele isikhwama esikhwameni sepulasitiki esingabonakala kabusha.
Izingcezu ezingama-200 ezilahlekile ezitholakala kalula zomlomo wamaski ungqimba ongu-3-masks uthuli olunamandla okuzivikela olugcina imaskhi enamacici, isibonisi esiluhlaza okwesibhakabhaka
I-Bestseller cha. 8
I-von Jungfeld - indwangu yomlomo womkhala wamasent 100% ukotini oqinile wombala we-3-pack
I-✅100% COTTON: Izindwangu zethu zomlomo wezindwangu ziyasebenza futhi. Njengesembozo sendwangu, ungageza kalula, usimbi futhi uyisebenzise futhi.
COL IMINININGWANE EZIJWAYELEKILE: Ukuze ukwazi ukuthunyelwa ngokushesha ngangokunokwenzeka, okwamanje awukwazi ukukhetha umbala (uzothunyelwa: omhlophe, omnyama kanye / noma i-beige)
Mask Imaski yempumulo yomlomo: Idizayini yomlomo wethu wamaski wekhala inconywe yiRobert Koch Institute. Sekuphoqelekile emazweni amaningi.
W ukuthungwa emikhiqizweni yasendaweni eJalimane naseYurophu: Ngokuthengwa kwemask yakho yendwangu usekela umnotho eJalimane naseYurophu
✅ Washable 95 °: Isembozo sobuso bethu siyakwazi ukugeza uma sishisa ngama-95 ° bese siguqulwa kabusha
I-5pc yomlomo wesikhumba somlomo wamasende omnyama ovikela izendlalelo ezi-3 ngezicucu zoboya bokuphefumula imaskhi yomaski yokumboza isembozo somlomo
ilungele izingane kanye nabantu abadala // ububanzi bokulethwa: izingcezu ezi-5 kwi-polybag
Izendlalelo ezi-3 // ngaphakathi nesihlungi soboya, ngaphandle kwe-100% okungalukwanga
Ngokusho kwe-OEKO TEX 100 ejwayelekile - i-allergy-hlangothi futhi inobungani besikhumba
Ubukhulu: 170 mm x 170 mm lapho welulwa
iyageza futhi isebenze kabusha